China Universal Silicone Sealant ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - GNS
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Universal Silicone Sealant ဖြစ်သည်
Universal Silicone Sealant G11 သည်ဆီလီကွန်ကိုအခြေခံသည်။ ၎င်းသည်ရာသီဥတုကောင်းမွန်မှု၊ ရေစိုခံနိုင်မှုနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအများစုတွင်ကောင်းစွာစေးကပ်မှုရှိသည်။ ၁၈ နှစ်ကျော်ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့်အတူ GNS ထုတ်ကုန်များကိုအာရှ၊ တောင်အမေရိက၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ ဥရောပနှင့်အာဖရိကတို့ကိုလွှမ်းခြုံသောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံပေါင်း ၇၈ နိုင်ငံနှင့်ဒေသများသို့ရောင်းချခဲ့သည်။
UNIVERSAL SILICONE SEALANT ၏ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး ၁
et— Acetoxy အခန်းအပူချိန်ပျောက်ဆေးလိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။
â - ထူးခြားသောရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ အိုဇုန်းလွှာ၊ ဆီးနှင်း (သို့) အပူချိန်လွန်ကဲမှုကိုခုခံသည်။
၂။ UNIVERSAL SILICONE SEALANT ၏စွမ်းဆောင်ရည်
စမ်းသပ်မှု Parameter ယူနစ် ရလဒ်
ဖြည့်စွက်စမ်းသပ်ထားသည့်အတိုင်း ၂၃â„ ƒနှင့် ၅၀% RH
တိကျသောဆွဲငင်အား g/ml ၀.၉၃ ± ၀.၀၂
စီးဆင်းမှု (ကျဆင်းခြင်းသို့မဟုတ်ကျဆင်းခြင်း) မီလီမီတာ 0
အတားအဆီးမဲ့အချိန် နာရီ â‰¤1.0
အရေပြားအချိန် မိနစ် ၅ ~ ၁၀
ဆေးကြောချိန် (၅ မီလီမီတာ) နာရီ â‰ ¤၁၈
၂၁ ရက်၊ ၂၃ နာရီနှင့် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း RH ဖြင့်ကုသပျောက်ကင်းသည်
Durometer မာကျောမှု၊ ကမ်းနား A အချက်များ 14
လှုပ်ရှားမှုစွမ်းရည် % ပေါင် ၂၀
အဆုံးစွန်သောဆွဲအား Mpa 0.18
Break တွင် Ultimate Elongation % 260
3. တက္ကသိုလ် SILICONE SEALANT ၏လျှောက်လွှာ
၄။ UNIVERSAL SILICONE SEALANT ၏သိုလှောင်မှုနှင့်အသက်ရှင်သန်မှု
ထုတ်လုပ်သည့် နေ့မှစ၍ ၂၅ လအောက်အေးသောခြောက်သွေ့သောနေရာတွင်သိုလှောင်ပါကသိုလှောင်စဉ်အပူနှင့်တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်နှင့်ဝေးဝေးထားပါ။
၅။ UNIVERSAL SILICONE SEALANT ၏ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှု
ထုပ်ပိုးမှု: ယမ်းတောင့် 220ml မှ 300ml, 590ml 600ml ဝက်အူချောင်း, အိုး 190L ယမ်းတောင့် ၂၄ ctgs/ctn၊ ဝက်အူချောင်း ၂၀ ထုပ်/ctn (အထူးသတ်မှတ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ )
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး၊ ပင်လယ်၊ လေကြောင်း၊ ကုန်းကြောင်းပို့ဆောင်ရေး
မေး: GNS ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲ။
A: 1. GNS သည် silicone sealant ထုတ်ကုန်အတွက် ၁၈ နှစ်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံရှိပြီးနှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုတန်ချိန် ၄၀၀၀၀ ရှိသည်။
၂. အပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းဖြင့်အချိန်မီပေးပို့။ အခမဲ့နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် OEM ဒီဇိုင်းကိုအခမဲ့ပံ့ပိုးပေးသည်။
၃။ ဒူဘိုင်း၊ ဘရာဇီး၊ ယူကရိန်း၊ ရုရှားစသည့်နိုင်ငံခြားပြပွဲများစွာတွင်ပါ ၀ င်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ဤစျေးကွက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာသိသည်။
Q: Neutral silicone sealant နှင့် Acetic silicone sealant ကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။
A. Neutral silicone sealant ကို indoor သို့မဟုတ် outdoor နှစ်ခုလုံးတွင်သုံးနိုင်သည်၊ ဒါပေမယ့် acetic silicone sealant ကို indoor သာသုံးနိုင်သည်။
hot Tags:: Universal Silicone Sealant၊ လက်ကား၊ ဝယ်၊ စိတ်ကြိုက်၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သက်သာသာ၊ အရည်အသွေးကောင်း၊ အရည်အသွေးမြင့်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်သည်၊ စက်ရုံ၊ စျေး၊ စျေးနှုန်းစာရင်း၊ ကိုးကားချက်